မူလစာမျက်နှာ » ကနျြးမာရေးသတင်းများ link ကို entre ကျိုးနှလုံးရောဂါနှင့်ကင်ဆာအားဖြင့်စဉ်းစားရခက် "သုတေသနပညာရှင်များက
link ကို entre ကျိုးနှလုံးရောဂါနှင့်ကင်ဆာအားဖြင့်စဉ်းစားရခက်သုတေသီများ
ကင်ဆာသင်၏နှလုံးကိုချိုးဖျက်နိုင်ပါသလား? တစ်ဦးကလေ့လာမှုအသစ်ရှိတယ်တဲ့ link ကို entre ကင်ဆာရဲ့ရှည်လျားသက်တမ်းကုန်ကြိုးပဲ့နှလုံးရောဂါဟုခေါ်တွင်ခဲ့ပါသည်ကြောင်းအကြံပြုထားသည်။
ထဲမှာဗုဒ္ဓဟူးနေ့ထုတ်ဝေသောလေ့လာမှု, အမေရိကန်နှလုံးအသင်းဂျာနယ်, ဒါကကျိုးနှလုံးရောဂါနှင့်အတူလူကင်ဆာခဲ့ကြောင်းနှင့်အထူးခုနှစ်တွင်ဒါကစာတမ်းလူနာများကင်ဆာမရှိဘဲကျိုးနှလုံးရောဂါဝေဒနာရှင်တွေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ငါးနှစ်အတွင်း၌ Die ဖို့ပိုကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ 16အတွက်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
သက်တမ်းကုန်စိတ်ဖိစီးမှု Cardiomyopathy ကိုသို့မဟုတ် Takotsubo Cardiomyopathy ကိုကိုခေါ်ကျိုးနှလုံးရောဂါ, qui est စတေးလျ, စိတ်ဖိစီးမှုအခြေအနေများအားဖြင့်အပေါ်ယူဆောင်နိုင်ယာယီလိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်နှလုံးကြွင်းသောအရာကိုပိုမိုခိုငျအမာစုပ်ကြောင့်ကျိုးနှလုံးရောဂါစဉ်အတွင်းနှလုံးရှိရမည်ပုံမှန်အားဖြင့် qui မေလချပေးရပ်, အ selon Mayo Clinic ဆေးခန်း.
A 2018 ထံမှလေ့လာမှု သူတို့ကကင်ဆာတဲ့သမိုင်းခဲ့ပါလျှင်ကျိုးနှလုံးရောဂါနဲ့အတူတွေ့ရှိခဲ့ရောဂါလူနာသူတို့ရဲ့ကုသမှုသြစတေးစဉ်အတွင်းလက်တွေ့ပြဿနာများရင်ဆိုင်ရဖို့နှစ်ကြိမ်အဖြစ်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏။ အဲဒီတွေ့ရှိချက် entre les အခြေအနေနှစ်ခုချိတ်ဆက်မှုရှိပါခဲ့လျှင်ကြည့်ရှုရန်စုံစမ်းစစ်ဆေးတိုကျတှနျး။
အဆိုပါလေ့လာမှုအသစ်မှာတော့ဒေတာသုတေသီများကနိုင်ငံတကာ Registry ကို Takotsubo ကျိုးနှလုံးရောဂါနှင့်အတူ 1,600 လူနာထက်ပိုထံမှမှာကြည့်ရှုကြ၏။ သူတို့ဟာ 16ထဲမှာကင်ဆာခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကင်ဆာနှင့်အတူသူများသည်နီးပါး 90 ရာခိုင်နှုန်းကအမျိုးသမီးတွေဖြစ်ကြ။ ကင်ဆာ၏အများဆုံးမကြာခဏအမျိုးအစားများ Reviews ရင်သားကင်ဆာသည်အစာအိမ်နဲ့အူလမ်းကြောင်းစနစ်ဖြင့်နောက်တွင်အသက်ရှူလမ်းကြောင်း, ပြည်တွင်းရေးလိင်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများ, အသားအရေနှင့်အခြားဒေသများခဲ့။
ဆေးရုံရှိနေစဉ်ကပိုဖှယျအထူးကြပ်မတ်နှလုံးနှင့်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာလေယာဉ်တင်သင်္ဘောသေဆုံးသို့မဟုတ်လိုအပ်မှသော်လည်း 30 Syndrome, ခဲ့ပြီးနောက်ရက်ပေါင်းဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ဖို့သကဲ့သို့ဖှယျရှိသညျ။
အဆိုပါခဲ့ syndrome ရောဂါပြီးနောက်ငါးနှစ်အတွင်း Die ပိုပြီးကြိုက်တယ်။
အဆိုပါလေ့လာမှုတစ်ခုသာ link ကို entre ကင်ဆာနှင့်ကျိုးနှလုံးရောဂါတွေ့၏ ဒါကြောင့်တစ်ဦးကအခြားဖြစ်ပေါ်စေသည်ဒါကမပြထားဘူး။ သို့သျောထိုထက်ပိုသောသုတေသနမျက်ခြေမပြတ်ဖြစ်ပါတယ်ဘယ်မှာရှိဧရိယာရဲ့လေ့လာမှုစာရေးဆရာကဆိုသည်။
အဆိုပါလေ့လာမှုရဲ့ဦးဆောင်ရေးသားသူဒေါက်တာခရစ်ယာန် Templin "[ကင်ဆာ] နှင့်ကင်ဆာကုသမှုကိုစူးစမ်းခြင်းကိုခံရကျိုးပဲ့နှလုံးရောဂါသင့်တယ်၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုမြှင့်တင်နိုင်ပါစေ, ငါတို့တွေ့ရှိချက်ဓါတုဆေးသွင်းကုသမှု၏အလားအလာ cardiotoxic သက်ရောက်မှုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်တစ်ခုထပ်တိုးအကြောင်းပြချက်ပေးရာကယန္တရား" ကြေညာချက်ထဲမှာဆွစ်ဇာလန်, Said အတွက်ဇူးရစ်တက္ကသိုလ်ဆေးရုံဇူးရစ်မှာတက္ကသိုလ်နှလုံး Center မှာစိတျနှလုံး Catheterization Laboratories Andreas Grüntzig၏ Interventional နှလုံးရောဂါ၏ညွှန်ကြားရေးမှူး
"ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှု ... သင့်ပါတယ်ကျိုးပဲ့နှလုံးရောဂါသင့်တယ်ရင်ဘတ်နာကျင်မှုတွေ့ကြုံခံစားသူကားအဘယ်သူကင်ဆာရောဂါသို့မဟုတ်ကုသမှုခံယူလူနာများအတွက်မှတ်ရမည်ဒါကကင်ဆာရောဂါရှာဖွေကုသရေးပါရဂူများနှင့်သွေးအထူးကုဆရာဝန်တွေထဲမှာအသိအမြင်, သူတို့အပေါ်အသက်ရှုသို့မဟုတ်မူမမှန်များ၏ဝြခင်းမြှင့် electrocardiogram"Templin ကဆိုသည်။ အလားတူပင် "သူတို့ရဲ့ခြုံငုံရှင်သန်မှုကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေရန်ကင်ဆာများအတွက်ပြလျှင်ကျိုးနှလုံးရောဂါနှင့်အတူလူနာအတှကျအကြိုးခွေငျးငှါ," ဟု၎င်းကပြောသည်။
ပထမဦးဆုံးလိုအပ်ချက်မျက်နှာခဲ့ 1990 အတွက်ဂျပန်တွင်, အဘယ်မှာဆေးသမားနောက်ထပ်ထိပ်တန်းစမ်းသပ်ခြင်း, နှလုံးတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပေါ်စေသည်ဒါကလက်မှတ်ပေါင်းသွေးခဲ၏အဘယ်သူမျှမပေါ်၌နှလုံးတိုက်ခိုက်မှုရောဂါလက္ခဏာတွေအဆုံးနှင့်အတူလူသတိပြုမိသည်။
ထိုသို့သောဘဏ္ဍာရေးဆုံးရှုံးမှု, ဒါမှမဟုတ်တစ်ဦးပြင်းစွာသောအအငြင်းအခုံသဘာဝဘေးအန္တရာယ်အဖြစ် - - နှလုံးရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပျက်စီးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်အစား, လိုအပ်ချက်တစ်ဦးကပြင်းထန်ဖိအားတဲ့အခါမှာဖြစ်ပေါ်သည်။ အဆိုပါနှလုံးရဲ့မြစ်ရေတင်စီမံကိန်းအခန်းထဲကလက်ယာယီကိုကျယ်ဝန်းစေနှင့်ကောင်းစွာစုပ်ပါဘူးသောကြောင့် Cardiomyopathy, ensues ။ အဆိုပါရောဂါမျှနှလုံးကြွက်သားပျက်စီးမှုနှင့်နှလုံးအစာကျွေးသည့်သွေးကြောဆိုင်ရာသွေးလွှတ်ကြောမပိတ်ဆို့ရှိရည်ရွယ်ထား, အသက်ရှုရင်ဘတ်နာကျင်မှုနဲ့ရင်ကြပ်နှင့်အတူတစ်ဦးနှလုံးတိုက်ခိုက်မှုနဲ့တူခံစားရ၏။
"ဒီဆက်စပ်မှုတွေ entre les နှစ်ခုမသိရသေးဖြစ်ပါသည်, ရည်မှန်းချက်အတော်များများကင်ဆာကုသမှုကိုလည်းနှလုံးတခုတခုအပေါ်မှာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်သည်" ဟုဒေါက်တာ Laxmi ထာ, အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ် State University မှတားဆီးကာကွယ်ရေးနှလုံးအထူးကုနှင့်အမျိုးသမီးရဲ့နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာကျန်းမာရေးညွှန်ကြားရေးမှူးပြောပါတယ်။
အသစ်ကသုတေသနနှင့်အတူမပါဝငျခဲ့ပေဘယ်သူကထာကတစ်ဖွဲ့လုံးကလူနာမှာကြည့်ဖို့သိသိသာသာရဲ့ကဆက်ပြောသည်။ "ထိုသို့သောဆေးလိပ်သောက်, မိသားစုသမိုင်း, ဆင်းရဲသားကိုအစားအစာနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းမရှိခြင်းနှင့်အမျှအန္တရာယ်ကိုအချက်များနှလုံးသွေးကြောရောဂါနှင့်ကင်ဆာ entre ထပ်တူ၏အတော်များများက" ဟုသူမကဆိုသည်။
ပြသမတိုင်မီကသုတေသနဆိုလိုသည်မှာအချို့သောကင်ဆာမူးယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူကုသမှု-ခဲ့ပြီးအဆိုပါရောဂါနှင့်ဆက်စပ်ရှိပါတယ်, အထူးသဖြင့် 5-သူကတော့နှင့် rituximab ရည်မှန်းချက်ကဒီလူတချို့အတွက်ဖြစ်ပေါ်ဘယ်ကြောင့်အတိအကျအကြောင်းပြချက်တွေ့ရခဲသော-ဖြစ်ခဲ့သည်။
, ဒီကွောငျ့ "တစ်စုံတစ်ဦးကနှလုံးရောဂါနှင့်ကင်ဆာများ၏သမိုင်းအရင်းခံကျတာကတော့ပြီဆိုရင်, သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့နှလုံးအထူးကု Chat ကိုတွေ့မြင်ရန်လိုအပ်ပါတယ်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများ OK ကိုလျှင်သူတို့ဆက်လက်ရိုက်ရိုက်နေတာ," ထာကပြောပါတယ်။
ဒေါက်တာ Francesco Santoro, အီတလီအတွက် Foggia ၏တက္ကသိုလ်မှနှလုံးအထူးကုများနှင့်ကျိုးနှလုံးရောဂါအတွက်ဦးဆောင်ကျွမ်းကျင်သူသူစတေးလျကင်ဆာနှင့်အတူသူများသည်ပြီးနောက်-ဆငျးရဲဒုက်ခကင်ဆာမပါဘဲသူများသည်ထက်ကျိုးပဲ့နှလုံးရောဂါပိုဆိုးအခြေအနေကောအတော်လေးအဘယ်ကြောင့်သေချာမကပြောသည်။ ရည်ရွယ်ချက်သူက "ပိုပြီးသုတေသနဒီများအတွက်အကြောင်းရင်းရှင်းပြပြုခံရဖို့လိုအပ်ကြောင်းနှင့်စံနှလုံးပျက်ကွက်မူးယစ်ဆေးဝါးများပေါင်းစပ်တဲ့အကျိုးကျေးဇူးပေးရမလားဆိုရင်။ " သတိပြု
"နှလုံးရောဂါနှင့်အတူလူနာ Break-ရှိသည်မဟုတ်ပါဘူးဆိုရင်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖိအား, ထိုအခါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသင့်ပါတယ်ဆရာဝန်များကင်ဆာရှာငါမဆိုလှည့်ကွက်ရည်ရွယ်ချက်-ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး" ဟု၎င်းကပြောသည်။
ကျသကေို အား NBC ကျန်းမာရေး ON Twitter & FaceBook
Shamard ချားလ်စ်, MD
Shamard ဒေါက်တာချားလ်စ်အား NBC သတင်းနှင့်ယနေ့တွင်များအတွက်ဆရာဝန်တစ်ဦး-သတင်းစာဆရာဖြစ်ပါသည်, အစီရင်ခံကျန်းမာရေးမူဝါဒ, ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအစပျိုး, ဆေးပညာမှာမတူကွဲပြားမှုတွေ, နှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုသုတေသနနှင့်ဆေးဝါးကုသမှုအသစ်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှုဖြစ်ပါတယ်။
အူသိမ်အူမကင်ဆာ: ဒီလေ့ကျင့်ခန်းရောဂါတိုက်ဖျက်ဖို့ကူညီနိုင်ပါစေလေ့လာမှုပြောပါတယ် - သင်သည်ဤပြုကြသနည်း
Mutant ကင်ဆာဆဲလ်တွေ Unmasking
အကြံပြုချက်များ: Drawing ဆွဲ၏ 26 MESMERISANTS အခမဲ့ BE တံ့သော FOR
ပွင့်လင်းကာလခိုးယူပုဂ္ဂိုလ်ရေးပစ္စည်းများ - လူတွေ
ကင်မရွန်း-အဲန်ဂျီအိုများန်ကြီးများ၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးက၎င်း၏အရပ်ဌာန၌ DG Camair Co. , ပေးရမည်
Meghan Markle နှင့်မင်းသားဟယ်ရီဗြိတိန်နှင့် # 039 ထွက်ပြေးလာသူများပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်တိုက်ထုတ်ကြလိမ့်မည်
လူတွေ & ပုံစံမျိုးမှာနေထိုင်3,283
TECH & Telecom1,625